Tilmaamaha Qorsheynta Fasalka 10aad - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Sannadka labaad ee ardaydeena badankood wuxuu noqon karaa gelitaankoodii ugu horreeyay ee fasallada AP. Markaad dhisaysid qorshahaaga afarta sano ah, waxaan ku dhiirrigelinaynaa kuwa qorsheynaya inay galaan kulliyadda inay isku dayaan ugu yaraan hal fasal oo ah AP ama IB ka hor intaadan qalin-jabinin. Inta badan ardaydeenu waxay qaadan doonaan koorsooyin badan oo AP ama IB ah.
Baadhitaanku wuu cad yahay: ardayda dhamaysta koorsooyinka AP ama IB inta lagu jiro dugsiga sare waxay u badan tahay inay dhammaystiraan shahaadadooda jaamacadeed. Waxay ku saabsan tahay helitaanka aasaas adag oo ku saabsan sida wax loo barto iyo sida loo maareeyo dalabaadka koorsada heerka kuleejka ah. Ardayda qaar waxay dooran doonaan inay tijaabiyaan sanad dugsiyeedka labaad, kuwa kale waxay sugi doonaan illaa sanadka ugu dambeeya. Arday kasta waa u gaar!
Si loo helo dibloomada Dugsiga Sare ee Minnetonka, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha qaarkood. Halkan ka daawo Shuruudaha Qalinjabinta MHS .
Ka xulo koorsooyinkan sanadka ah:
Daraasadaha Mareykanka 10 Maamuusta (Akhriska Xagaaga)
Fasalkani wuxuu si dhow u muraayadahayaa waxqabadyada waxbarashada ee Barnaamijka IB . Haddii aad ka sii fikirayso IB, fasalkani waa hab fiican oo lagu tijaabiyo waayo-aragnimada u eg IB ka hor intaadan qaadan go'aanka lagu qabanayo barnaamijka.
Wuxuu isku daraa suugaanta mareykanka ee fasalka 10aad taariikhda mareykanka ee fasalka 10aad (eeg qeybta Ingiriiska)
Haddii aad ku jirtid xayndaabka ku saabsan AP US History, tixgeli inaad iska qorto koorsada Pre-AP US Tonka Online koorsada xagaaga.
Xisaab ahaan, waa inaad raacdaa tallada macallinkaaga xisaabta hadda. Macallimiinteenna xisaabta ayaa si aan caadi ahayn ugu xeel-dheer inay ardayda geliyaan heer sax ah.
AP Chemistry (Shaqada xagaaga oo balaaran)
Haddii aad ku jirto xayndaabka ku saabsan AP Chemistry, waxaa jira fasal Pre-AP Chemistry ah oo laga heli karo Tonka Online .
Khibrada Isticmaalaha (UX) Naqshadeynta (u furan sophomores), Mabaadi'da Sayniska Kombiyuutarka AP (amaahda la doorto) iyo Naqshadeynta Dijital ah ee Dijital ah (oo fulisa buundada Farshaxanka)
Si loo buuxiyo 6dii dhibco ee lagugula taliyay inta lagu jiro sanadkaaga labaad, waxaad ku dhammaystiraa jadwalka koorsada xulasho xulasho ah. Dib u eeg Diiwaanka Skipper fursadaha koorsada hadda.
Intaa Ka Badan Ku Samee Afar
Adoo ka faa'iideysanaya Tonka Online , waad dhammaystiri kartaa koorsooyinka loo baahan yahay ama u diyaar garowga inta lagu jiro xilliga kuleylaha, rogrogmi karo jadwalkaaga maalinta ama aad qaadan karto fasal dheeraad ah inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Tonka Online , waxaad ku sameyn kartaa:
Ku dhammee saddex sano xisaab laba sano gudahood
Qaado laba cashar muusiko inta lagu jiro sanadka
Ku raadso xulashooyinka la jaan qaadi kara hamigaaga
Hubso waqtiga loogu talagalay barnaamijyada gaarka ah inta lagu guda jiro sannadkaaga yar iyo kan weyn.
Iyada oo in kabadan 300 koorsooyin lagu bixiyo Dugsiga Sare ee Minnetonka - oo ay kujiraan barnaamijyo ay ka mid yihiin VANTAGE, International Baccalaureate, Project Lead the Way, iyo barnaamij heer sare ah oo farshaxanka— ardayda ayaa mararka qaarkood dhib badan kala kulma inay ka dhigaan wax waliba taam ah. Tonka Online ayaa kaa caawin kara!